नेपाल, महान पहाड र काल्पनिक परिदृश्यको भूमि | Absolut यात्रा
नेपाल दुई राक्षस बीचको सीमामा अवस्थित एक सानो देश हो: चीन र भारत। हिमाली क्षेत्र सहित यस भित्रका केही चुचुराहरू सामेल छन् हिमालय, यो एक उत्तम गन्तव्य हो यदि तपाईं पैदल यात्रा वा चढाई मन पराउने प्रभावकारी परिदृश्य जुन यसबाट देख्न सकिन्छ। Annapurna वा आफ्नै सगरमाथा.
तर, यदि तपाईंसँग साहसी मनोभाव छैन भने, नेपालले तपाईंलाई प्रस्ताव गर्न अन्य धेरै कुरा पनि छ। तपाई जस्तो शहरहरू भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ Patan, काठमाडौं o भक्तपुर, यसको मध्यकालीन क्षेत्रहरू, भव्य दरबारहरू र लुकेका मन्दिरहरूका साथ। तपाईलाई थाहा पनि छ प्राकृतिक पार्कहरू। र, जे भए पनि, नेपाल तपाईं पुग्नको लागि उत्तम गन्तव्य हो निर्वाण। यदि तपाईं यो जान्न चाहानुहुन्छ भने हामी तपाईंलाई हाम्रो अनुसरण गर्न आमन्त्रित गर्दछौं।
1 नेपालमा के हेर्ने र के गर्ने
1.1 सगरमाथा र अन्नपूर्णा
1.2 नेपालको प्राकृतिक पार्क
1.3 काठमाडौं, देशको राजधानी
1.4 काठमाडौं उपत्यका, नेपालको अर्को आवश्यक मार्ग
1.5 पोखरा, नेपालको अन्य पर्यटन शहर
2 नेपालमा के खाने छ
3 एशियाई देश कसरी पुग्ने
4 नेपाल यात्रा को लागी सल्लाह
नेपालमा के हेर्ने र के गर्ने
हामी थोरै व्यायामको साथ नेपालको यात्रा सुरु गर्न सक्दछौं र त्यसपछि यसको मुख्य शहरहरू र यसको पवित्र ठाउँहरू जान्न सक्दछौं, अन्य प्राकृतिक क्षेत्रहरू बिर्सन बिना जसका सौन्दर्यहरू पहाडको दृश्यबाट विचलित हुँदैनन्।
सगरमाथा र अन्नपूर्णा
नेपालको दुई मुख्य आकर्षणहरू नजिक पुग्न तपाईं एक दक्ष पर्वतारोही हुनुपर्दैन सगरमाथा र Annapurna। तपाईं माथि जान सक्नुहुन्छ आधार शिविर पहिलो, जुन समुद्री सतह भन्दा पाँच हजार मिटर माथि छ। जैसा कि तपाई अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, यो सजिलो भ्रमण होइन किनकि यो चौध दिनसम्म रहन्छ र उचाई बिमारीले यसलाई अझ गाह्रो बनाउँछ। तर प्राय: आगन्तुकहरूको लागि यो किफायती छ। तपाईलाई आवाश्यक हुन्छ विशेष अनुमति, तर अनुभव यसको लायक छ।
तपाईं अन्नपूर्णामा पर्वतारोहण पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सँगै, तिनीहरू दुई सय पचास किलोमिटर मार्ग बनाउँदछन् जुन तपाईं चरणहरूमा गर्न सक्नुहुनेछ र छुट्टै। तर, जे भए पनि तपाईले रमाइलो लिनुहुनेछ विश्व मा अद्वितीय पहाडी परिदृश्य.
अर्कोतर्फ, दिमागमा राख्नुहोस् मौसमविज्ञान। यी हिमालहरूको पहुँचका लागि उत्तम महिनाहरू एकातिर अक्टोबर, नोभेम्बर र डिसेम्बर र अर्कोतर्फ मार्च, अप्रिल र मे हुन्। कम तापक्रम र हिउँको कारण जनवरी र फेब्रुअरी सिफारिस गरिदैन। जुन, जुलाई, अगस्ट र सेप्टेम्बर को रूपमा, ती वर्षा seasonतु हुन् जसले मार्गहरू कठिन बनाउँदछन्। यद्यपि यो सत्य पनि हो कि पहाडहरू भ्रमण गर्न सब भन्दा उपयुक्त महिनाहरूमा त्यहाँ धेरै पर्यटकहरू छन् जो उनीहरूका मार्गहरू गर्न चाहन्छन्।
रॉयल चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज
नेपालको प्राकृतिक पार्क
एसियाली देशसँग धेरै प्राकृतिक पार्कहरू छन्। तपाईं भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ बर्डियाको, दक्षिण पश्चिम मा अवस्थित र यसको बंगाल बाघ र यसको विशाल मगरमच्छका लागि परिचित। OR ल्या Langटाangमा एक, जहाँ हिउँ चितुवा र भालुहरू छन्। तर सबै भन्दा माथि, तपाइँ दुई वर्क पार्क को रूप मा वर्गीकृत जान्नु पर्छ विश्व सम्पदा.
पहिलो हो सगरमाथाबाट एकजुन यस क्षेत्रमा छ कुम्बु सगरमाथा मासिफको एक राम्रो भाग कभर गर्दै। तपाइँ तपाइँको यात्रा सुरु गर्न सक्नुहुन्छ आगन्तुक केन्द्र, जो शहर मा छ नाम्चे बजार। औटोचोनस प्रजातिको लागि, यो तिब्बती मृगको क्षेत्र हो।
दोस्रो, यसको अंशको लागि हो रॉयल चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, देश को दक्षिण मा स्थित र त्यो एक शाही आरक्षित थियो। तपाईंको नामको अर्थ हो "जंगलको मुटु", जसले तपाइँ वनस्पति को एक विचार दिनुहुन्छ जुन तपाइँ फेला पार्दै हुनुहुन्छ। यसको जीव जन्तुको लागि, यससँग भारतीय लोप भइरहने गंगा वा गंगा घिरियाल जस्ता धेरै लोपोन्मुख प्रजातिहरू छन्, विशाल सौरोप्सिड जसको सानो टाउकोले मात्र यसलाई माछामा खान दिन्छ।
काठमाडौं, देशको राजधानी
काठमाडौं भ्रमण गर्नका लागि एक लाखौं बासिन्दाहरूको शहर प्रवेश गर्नुपर्नेछ जुन कच्चा सडकहरू, विशाल प्रदूषण र बहिरा आवाजले। तर यसले अद्भुत स्मारकहरू पनि पहुँच गरिरहेछ, जसमध्ये केही २०१ 2015 को भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको थियो।
काठमाडौंमा तपाईले भेट्नु पर्ने पहिलो चीज हो दरबार स्क्वायर, केन्द्रक जुन शाही परिवारको लागि निवासको रूपमा सेवा गर्‍यो। वास्तबमा, दरबार यसको अर्थ "दरबार" हो। यो एक वर्ग र यसको आसन्न सडकहरू, यसको महल भवनहरू र मन्दिरहरूको साथ बनेको छ। तर सबै भन्दा जिज्ञासु कुरा यो हो कुमारीको घर। यही नामको देवता प्रतिनिधित्व गर्न रोजिएको एक जवान केटीलाई यो नाम हो। उनी नेवार संस्कृतिको व्यक्तित्व हुन् र कुमारी बन्न, सानी केटीले धेरै परीक्षा पास गर्नुपर्दछ। थप रूपमा, जब उनीको भूमिका रहन्छ, ऊ आफ्नो घर-मन्दिरमा कुनै पनि हालतमा छोड्न सक्दैन।
तपाईले काठमाडौंमा पनि हेर्नुपर्दछ बौद्धनाथ स्तूप, विश्वको सबैभन्दा ठूला मध्ये एक हो र बुद्धको आँखाले ताज पहिरो। हरेक दिउँसो, देश भर देखि भिक्षुहरू प्रार्थनाको वरिपरि भेला हुन्छन्। थप रूपमा, तपाईंको वरिपरिको तिब्बती शिल्पहरूको असंख्य क्याफे र पसलहरू छन्।
र, तपाइँसँग पुग्नु पर्छ स्वयमभुनाथ बौद्ध मन्दिर, विशेषता बाँदरहरूले भरिएको, जुन विश्व सम्पदा हो र पहाडमा अवस्थित छ जहाँबाट तपाईंले सम्पूर्ण शहर देख्नुहुनेछ। अन्तमा, भ्रमण गर्नुहोस् कोपान र फुलारी मन्दिरहरू र आराम गर्नुहोस् सपनाहरूको बगैचाकाठमाडौंको बीचमा एउटा सुन्दर नियोक्लासिकल डिजाइन पार्क।
काठमाडौं उपत्यका, नेपालको अर्को आवश्यक मार्ग
राजधानी भनिने काठमाडौं उपत्यकालाई थाहा नहुँदा तपाईले राजधानी छाड्न सक्नुहुन्न, यसमा दुई अन्य शहरहरू पनि छन्: पाटन र भक्तपुर, साथ साथै कुल एक सय तीस तीस स्मारकहरु क्षेत्र को रूप मा वर्गीकृत गरिएको छ कि यस्तै महत्व को जोखिममा विश्व विरासत साइट.
Patan तपाइँको निजी पनि छ दरबार स्क्वायरजुन पुरानो राजाहरूको दरबारको आँगन पनि हो। यसमा धेरै मन्दिरहरू पनि छन् जस्तै कृष्णको, अष्टभुज ढु stone्गाले बनेको; Degutale o विश्वनाथ, यसको ढु stone्गा हात्तीको साथ। ती सबैहरू सत्रौं शताब्दीमा निर्माण गरिएका थिए र आँगनहरू द्वारा अलग गरिएको छ जुन पछि नाम दिइयो चौक.
सन्दर्भमा भक्तपुर, देशको मुख्य सांस्कृतिक फोकस मानिन्छ, यसको स्नायु केन्द्रको रूपमा पनि छ दरबार वर्ग। यसको वातावरणमा, तपाईंसँग यस जस्तै निर्माणहरू छन् पचास विन्डोज को महल, ला गोल्डन ढोका र मन्दिरहरू जस्तै बट्सला, यसको विशाल घण्टी सहित, वा पशुपतिनाथ, यसको विशिष्ट कामुक नक्काशीको साथ।
तिनीहरू शहरमा केवल एक मात्र होइनन्। मन्दिर चांगु नारायण, यसबाट पाँच किलोमिटर, सम्पूर्ण देशको सबैभन्दा पुरानो हो, जबकि न्याटापोलातौमाधी वर्गमा र तत्वहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने he उचाइहरूको साथमा यो नेपालमा सब भन्दा माथि छ।
पोखरा, नेपालको अन्य पर्यटन शहर
यस शहरको अघिल्लो भन्दा धेरै फरक चरित्र छ, जुन देशको दोस्रो सबैभन्दा पर्यटन हो। किनकि यसको वरपर यसको छेउमा भ्रमण गर्नाले महान स्मारकहरू देखाउँदैन (जहाँ त्यहाँ उनीहरू पनि छन्), तर अद्भुत दृश्य.
केवल kilometers० किलोमिटरमा, पहाडहरू लगभग सात हजार मिटर उकालो नेत्रहीन घाटहरूको गठन गर्दछ। तिनीहरू बीच बाहिर खडा गण्डकी नदीमा एक, जुन पृथ्वीको सबैभन्दा गहिराइ हो। तपाईंसँग पोघाका क्षेत्र पनि छ पेवा ताल, दुई प्रभावशाली झरनाहरुका साथ जसमा यसको पानीहरु उनीहरु पसे पछि हराउँछन्।
गण्डकी नदी घाटी
तालमा एउटा टापुमा मात्र तपाईंसँग बराही मन्दिर, शहरको पुरानो भागमा तपाईंसँग त्यस्तै छ बिंध्याबासिनी y भीमसेन। थप रूपमा, पोखरा हिमालयको भ्रमणका लागि मुख्य सुरूवात पोइन्टहरू मध्ये एक हो।
यो त्यहाँका बासिन्दाहरूको संख्या र औद्योगिक उत्पादनको मुख्य केन्द्रहरू मध्ये एकबाट नेपालको दोस्रो शहर हो। त्यसैले हामी तपाईंलाई यो उल्लेख गर्दछौं। जे होस्, यो केहि एक हो व्यय भ्रमणहरू तपाइँको नेपाल यात्राको कारण यसमा विशेष उल्लेखनीय स्मारकहरू छैन।
नेपालमा के खाने छ
एसियाली देशको ग्यास्ट्रोनोमी असंख्य प्रभावहरूको परिणाम हो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यसको भारतीय, चिनियाँ र तिब्बती छिमेकीहरू हुन्। तर यसमा थाई भोजनका तत्वहरू पनि छन्। जे भए पनि तपाईले कहिल्यै गाईको मासु पकाउनु हुन्न किनकि यो ए हो पवित्र जनावर यसको जनसंख्या को एक राम्रो हिस्सा को लागी।
यसको सट्टामा, तपाईंसँग भैंसे र बाख्रा छ। तर देश को राष्ट्रीय नुस्खा हो दाल भाट तकारी, मसूरको सूप, चामल, र करी तरकारी सब्जी भएको कम्बो डिश। यो ट्रेमा यसको कम्पोनेन्टहरूसँग अलग सेवारत गरिन्छ र यससँग अचार, चूना, निम्बू वा हरियो खोर्सानी पनि हुन्छ।
अर्को परम्परागत पकवान हो मोमो, तिब्बती तरिकामा र मसलाको साथ एक प्रकारको मीटबलहरू सम्मिलित। तिनीहरू निश्चित रूपमा, भैंसी, बाख्रा वा कुखुराको मासुको साथ तयार छन्, तर तरकारीहरू मात्र। आफ्नो पक्ष को लागी, Chow mein वा हलचल-फ्राई नूडल्स चिनियाँ व्यञ्जनबाट आउँदछ।
अन्य विशिष्ट खाना हुन् काचीला वा मसलाको साथ कीराइएको मासु, सायन वा फ्राइड कलेजो, पुकाला वा फ्राइड मासु, क्वाती वा सिमी सूप र wo वा दाल केक। मिठाईका लागि, यो धेरै सामान्य छ धौ वा दही र आचार, एक प्रकारको खट्टा जाम।
सॉसको साथ मोमोजको प्लेट
अन्तमा, पेयको बारेमा, चिया राष्ट्रिय हो। पहाडी क्षेत्रहरूमा, न्यानो राख्नको लागि, तिनीहरूले यसलाई धेरै बलियो र माखनसहित लिन्छन्। तर तपाईं पनि प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ बाजरा वा चामल बियर; the उखुको जुस चिनीको; को Mahi, जुन छाछ वा हो रक्सी, एक ज्वार आसवन।
एशियाई देश कसरी पुग्ने
एशियाई देशसँग अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छ, काठमाडौंको त्रिभुवन, जुन उडानहरू संसारभर बाट आइपुग्छन्। त्यहाँ एकचोटि, तपाईंसँग अन्य शहरहरूको यात्रा छ। यद्यपि हामी उनीहरूलाई सिफारिस गर्दैनौं किनकि नेपालका अन्य एयरपोर्टहरू सानो छन् र केही हिमाली प्रकृतिका कारण धेरै खतरनाक छन्। थप रूपमा, यी विमानहरू जसले ती मार्गहरू बनाउँदछन् पनि राम्रो गुणवत्ताको छैनन्।
धेरै यात्री नयाँ दिल्लीबाट नेपाल यात्रा गर्न रुचाउँछन्। तिनीहरू यसलाई भित्र गर्छन् tren को सीमा शहर मा रक्सौल, जुन अझै सम्बन्धित छ भारत, र त्यसपछि बस काठमाडौं लानुहोस्।
कुनै पनि अवस्थामा, सञ्चार भनेको ठ्याक्कै नेपालको कडा सूट होइन। सडकहरू एकदम नराम्रो अवस्थामा छन् र विभिन्न शहरहरू जोड्ने बसहरू सस्तोमा जति असजिलो छन्। त्यहाँ निजी कम्पनीहरूका अन्य सवारी साधनहरू छन् जुन थोरै महँगो छ, तर केही अलि आरामदायक पनि छ।
जे भए पनि, यो सिफारिश गरिदैन कि तपाईं उनीहरूमा रातमा यात्रा गर्नुहोस्। चालकहरू प्रायः खाली सडकहरू दौडनका लागि फाइदा लिन्छन् र दुर्घटनाहरू सामान्य हुन्छन्। त्यस्तै, सामान चोरी अक्सर हुन्छ, त्यसैले हामी तपाईंलाई एक प्याडलक संग लक गर्न सल्लाह दिन्छौं।
अर्कोतर्फ, नेपाली कानूनले तपाईंलाई भाडा कार चलाउनबाट रोक्दछ। यसको सट्टामा, तपाईलाई भाडामा लिन सजिलो हुनेछ एक चालक संग र यो धेरै महँगो छैन। अन्तमा, मुख्य शहरहरू घुम्न, तपाईं लोकप्रिय छ रिक्शा दुबै पेडल र इलेक्ट्रिक (तथाकथित) टेम्पो, जो ठूला छन्), साथै मिनी बसहरू। एक जिज्ञासाको रूपमा, हामी तपाईंलाई भन्दछौं कि, तिनीहरूलाई बन्द गर्न, तपाईंले एउटा सिक्काले छतमा हिर्काउनु पर्छ।
पाटनको दरबार स्क्वायर
नेपाल यात्रा को लागी सल्लाह
एशियाई देशमा प्रवेश गर्न तपाईसँग हुनुपर्दछ पासपोर्ट कम्तिमा छ महिनाको लागि मान्य। साथै, तपाईंलाई एक आवश्यक छ विशेष भिसा तपाई कुन प्रक्रिया गर्न सक्नुहुन्छ अनलाइन मा वेब अध्यागमन विभागबाट वा बार्सिलोनाको वाणिज्य दूतावासमा। यदि तपाईं हिमालय वा अन्य पर्वतहरू भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंलाई पनि आवश्यक पर्दछ टिम्स, एक विशेष अनुमति जुन तपाईं आगमनमा प्रक्रिया गर्न सक्नुहुन्छ।
अर्कोतर्फ, तपाईंले लगाउनु पर्छ विभिन्न खोपहरू। सबैभन्दा धेरै टाइफस, पहेंलो ज्वरो, हैजा, MMR, हेपेटाइटिस, र टिटानस हो। औलो पनि अक्सर हुन्छ। यद्यपि तपाईंको जीपीले तपाईंलाई यसको बारेमा जानकारी दिनेछ। जे भए पनि हाम्रो सिफारिश तपाईले भाँडामा लिनु हो राम्रो यात्रा बीमा ताकि दुर्घटना वा बिरामी अवस्थामा तपाईको राम्रो हेरचाह हुन्छ।
देशको मुद्रा को रूप मा, यो छ nepalese ਰੁਪया। हामी तपाईंलाई सल्लाह दिन्छौं, यात्रा गर्नु भन्दा पहिले युरोलाई डलरमा बदल्न र काठमाण्डु एयरपोर्टमा एक पटक स्थानीय मुद्रामा यस्तै गर्नुहोस्। शहरहरूमा त्यहाँ एक्सचेन्ज हाउसहरू पनि छन्, तर उनीहरूले थप कमिशन लिन्छन्।
अन्तमा, हामी सिफारिस गर्दछौं कि तपाईले साईन अप गर्नुहोस् यात्रु पंजीकरण स्पेनको विदेश मामिला मन्त्रालय बाट समस्याहरु को स्थिति मा अधिक सजीलो हुन। र त्यो, एक पटक नेपालमा, तपाईं मात्र पिउनुहुन्छ बोतलको पानी र त्यो धुलेको फल वा सलाद स्वाद छैन कलबाट बच्न "यात्रीको पखाला".
अन्तमा, नेपाल एक सुन्दर देश हो जुन तपाईंलाई प्रस्ताव गर्दछ यस ग्रहमा सब भन्दा अग्लो पहाडहरू। र असंख्य स्मारकहरू र ग्यास्ट्रोनोमी पनि पश्चिमी ठाउँ भन्दा फरक छ। यदि तपाईं बाँच्न चाहनुहुन्छ भने एक फरक अनुभव, हामी तपाईंलाई एशियाई देशको लागि यात्रा गर्न प्रोत्साहित गर्दछौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » नेपाल